I-Harbourview Suite - I-Airbnb
Chéticamp, Nova Scotia, i-Canada
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Maurice
Ifulethi lethu elisanda kufakwa ifenisha litholakala kalula ebangeni elingahanjwa ngezinyawo kusuka ezitolo, ezitolo, ezindaweni zokudlela nakumaphabhu. Ukusuka kuvulande wethu, uzobe ubheke i-Cheticamp Island, lapho ama-sunsets ahlaba umxhwele ehlelekile osukwini. Indawo enhle yokungcebeleka nokujabulela ukuthula nokuzola kwe-Cape Breton Island esezingeni eliphezulu kunazo zonke. Umbungazi angaze akujabulise ngezikhathi ezithile ngezingoma ezimbalwa zase-France nezindaba zase-Canada.
Leli fulethi elisha linawo wonke amasevisi esimanje ozowadinga ukuze wenze ukuhlala kwakho kube ntofontofo futhi kujabulise. Inekamelo lokulala, ikhishi, indawo yokudlela, igumbi lokuphumula negumbi lokugezela. Inhlanganisela yomshini wokuwasha/yokomisa inikezwa ekusetshenzisweni kwakho. Indawo inomabonakude we-cable TV futhi ine-air-condition. Imidlalo ye-patio yangaphandle itafula nesihlalo esibekiwe, umgodi womlilo, indawo yokosa inyama nezindawo zokuphumula ezimbili ezinethezekile ukuze kube lula kuwe. Uma ikuthembela, ungapheka i-lobster yakho noma inkalankala kuvulande. Sizohlinzeka ngebhodwe nesitsha. I-suite iyatholakala unyaka wonke.
Kungakhathaliseki ukuthi usedolobhaneni lethu elihle okokuqala noma ukuvakashelwa ukubuya, kungakhathaliseki ukuthi ulapha ukuze ubuyele emuva, ukuze ujabulele isikhathi "nami" noma "thina", i-Cheticamp inokuningi ongakunikeza. Indawo, umculo, ukubukela imikhomo kanye nokuzijabulisa ngesikebhe sokugwedla, imizila yokuqwala izintaba, ukudla kanye/noma ukuthula okutholakala lapha kuzokwenza ufune ukubuya nesikhathi futhi.
U-Maurice no-Valerie bahlala eduze neyunithi futhi ngenxa yalokho bayatholakala ngesaziso sesikhashana kungaba nge-imeyili noma ngocingo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Chéticamp namaphethelo